Kunyora Hakugoni Kuyamwa, Zvinongoda Kudzidzira | Martech Zone
Kunyora Hakugoni, Zvinongoda Kudzidzira
Chishanu, July 5, 2013 Svondo, October 4, 2015 Douglas Karr
Mukadzi weshamwari yangu yepamwoyo, Wendy Russell, anogadzira terevhizheni uye munyori. Akabata rakabudirira nhepfenyuro paHGTV inonzi She's Crafty. Isu tanga tiri shamwari dzakanaka kweanenge makore makumi maviri ikozvino uye ndanga ndichitya tarenda rake rekugadzira uye kutyaira pamusoro pemakore.
Ini pachangu, handifunge nezvangu senge wekugadzira kana munyori. Asi zuva rega rega ndinozviwana ndichiuya nemhinduro dzakasarudzika uye kutora nguva yekunyora blog positi. Kunyangwe ndiri munyori akaburitswa, ini handizvifunge semunyori. Pamwe ndiko kuperevedza kwangu uye kukanganisa kwegrama kunotungamira kufunga kwangu.
Anenge mazuva ese, ini ndinoona ichi kushambadzira kuchimhanya paFacebook uye zvinondinetsa pese pandinozviona.
Handifunge kunyora kunoyamwa, kana neniwo handitendi kunyora kwakaoma. Zvandakadzidza pamakore gumi apfuura ndezvekuti kunyora kunongoda kuzvipira uye kuita.
Ini handikurudzirwe muzviitiko zvakawandisa - asi kunyora ndechimwe chezvinhu izvo zvinondichengeta usiku. Kana ini ndisina blog positi, ini chaizvo ndine nguva yakaoma yekutarisa pane zvangu zvimwe zvakakosha. Nguva zhinji, ini ndinoshanda zuva rese pane akati wandei ezvinyorwa kuti ndikwanise kutarisa kune rimwe basa kwemazuva anotevera.
Wendy is munyori, saka ndakamubvunza kuti zvakamuomera sei kunyora dzimwe nguva. Akataura kuti zvaimbonetsa kusvikira averenga bhuku racho Iyo Artist's Way. Wendy akataura kuti bhuku raJulia Cameron rakamubata zvakanyanya mukunyora kwake - uye nebasa rake. Zvikuru zvekuti, makore akazotevera, Wendy akatora musangano naAmai Cameron ndokumutenda iye pachake.
Amazon: Nechirevo chekutanga chekuti kutaura kwekusika ndiko kwega kwehupenyu hupenyu, Julia Cameron naMark Bryan vanokutungamira kuburikidza nehurongwa hwakakwana hwevhiki gumi nembiri kuti udzore kugona kwako kubva kumatombo akasiyana siyana, anosanganisira kudzikisira kutenda, kutya, kuzvidzora, godo. , kuzvipa mhosva, kupindwa muropa, uye mamwe masimba anovharira, kuchitsiva nekuzvivimba kwehunyanzvi uye nekugadzira.
Julia Cameron anotenda kuti munhu wese anogadzira uye munhu wese anokwanisa kunyora. Mushure memakore gumi ekunyora, ndinotenda zvakafanana. Kunyora hakuna kuoma zvekare. Uye kunyora hakuyamwa. Kana iwe uchitarisira kuve mushambadzi mukuru, ndinotenda iwe unofanirwa kuve munyori mukuru. Zvichida Iyo YeMhizha nzira yechako iwe (ndiyo yangu yekubatana chinongedzo chakabatanidzwa)!
10 Matipi Ekuvandudza Mamiriro Ekuvandudza
Jul 6, 2013 pa 2: 46 AM
Yap wakataura chokwadi ini ndinobvumirana newe !!
Jul 9, 2013 na10: 00 PM
Ini handikwanisi kubvumirana newe. Ndakaita zvakawanda muhupenyu hwangu; orchestration uye kurongeka, kutaridzika hunyanzvi, nhetembo, manejimendi, uye kunyora prose kwange kuri chinhu chakaomesesa kwandiri kuti ndiite. Chimwe chezvikonzero chikuru ndechekuti iwe paunoshanda nemupepeti kana vamwe vanyori uko mazwi ako aripo, zvakanaka, akarongedzwa, mavambo anodonha mukugadzirisa.
Ini ndakashandira anopfuura mazwi mazana mashanu kwenguva refu uye ndichinyanya kuisa pfungwa pane zvandakaita kunyange kuwana chidimbu chemumhanzi, nhetembo kana hunyanzvi hwekuona chaiko. Uye ndakave nekudzidziswa kwakawanda kwazvo semunyori, hei, pamwe ndiro dambudziko.
Kunyora chaiko, chave chiri chinhu chakaomesesa muhupenyu hwangu.
Mar 21, 2017 pa 2: 59 AM
Ini handina basa nezvakataurwa naRob kennedy, ndinobvumirana newe chose. Nekuti pasina kuverenga bhuku hazvigoneke kuunganidza ruzivo uye kuve munyori akanaka. Kutenda neyako yakanaka posvo